'' Uzungöl Cable Car '' ayaa beddeli doona masiirka Uzungöl | RayHaber | raillynews
Hometareenka'Uzungöl Cable Car' wuxuu bedeli doonaa qaddarka Uzungöl
17 / 10 / 2017 tareenka, GUUD, TURKEY
Fettahoglu Milkiilaha hoteelka, Sukru Fettahoglu, wuxuu leeyahay hawl muhiim ah oo ku saabsan mashruuca ropeway ee la dhisi doono xilliga dayrta
Fettahoglu Milkiilaha hudheelka, ganacsade Shukrut Fettahoglu, ayaa ka hadlay mashruuca mashruuca Udungöl ee furitaanka alaabta Alanya. Mashruuca Udungol Ropeway Fettahoglu, kaas oo xajiya hawl muhiim ah, ayaa sheegay in gaariga telefoonka ee Uzungol uu bedeli doono qadarka Uzungol'un. "Waxaan heystaa hal hello hada. Fettahoglu ayaa sheegay, in dadka nool ee ku nool degmada Uzungöl ay aad u faraxsan yihiin, gobalkuna wuu kasban doonaa Shukrut Fettahoglu, ganacsade dalxiis, ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay tababaraan mashruuca Telefoonada ee Udungöl si loogu qabto bisha Ramadaan ee 2018. Maaddaama 2013 aan la macaamili karno nidaamka rasmiga ah ee xafiisyada dawladda. 2014 Bishii Febraayo 14 waxaan helnay dhammaan hantidayada gobolka. Laga soo bilaabo wakhtigaas, waxaanu diyaarineynaa sidii loo sii deyn lahaa. Qorshahayaga si loo dhameeyo 2017 / 1 iyo xarumaha la xidhiidha 50 / 1 waa la dhammeeyaa. Kadib 100 ee Oktoobar, kooxaha ugu muhiimsan ee shirkadda wata ayaa soo socda. Tilmaamaha dhameystiran ayaa la sameyn doonaa waana la saxiixayaa heshiiska. Oo hadday dhacdo, waxaannu dooneynaa inaan dhulka u dhigno xilligan dayrta. Heshiiskeena shirkadda gawaarida telefishinka ayaa ah inaan qorsheyneyno inaan furo laba saldhig u dhexeeya xarunta labaad ee Uzungol Haroskomlari iyo xarun labaad oo ku taal Meşebaşı. Sarikaya Plateau X Waxaan qorsheyneynaa inaan furno saldhiga Sarikaya ee dayrta 16. Sababtoo ah waxaan ka shaqeyneynaa mashruuca loogu talagalay goobaha dabbaallada. Waxaan qorsheyneynaa in aan tababarno mashruucan xilliga barafka Mashruuca Alanya Teleferer, oo ah mashruuc riyadeed sanadlaha ah ee Alanya, wuxuu leeyahay isku mid aad u weyn oo leh mashruuca garab-wadareedka. Mashruuca Cable Cable ee mashruuca Alanya ayaa sidoo kale la siiyay shaqooyin badan oo adag. Waxay qaadatay sanadaha 2018 si loo helo ruqsadaha. Waxaan halkan u joognaa inaan furno oo aan furno furitaankan. Waxaan sameynay safar farsamo. Rugaha Alanya wuxuu ka kooban yahay mitirka 2018 iyo laba saldhig. Waxaan wada safray oo la baaray. Xarunta quruxda badan ayaa la sameeyay. Laakiin xarunteena maahan xarun noocaas ah. Xarunteena waxay noqon doontaa xarun safar maalmeed, goobo adeeg, beeraha iyo meelaha lagu nool yahay. Maalgashiga weyn. Waxaan qorsheyneynaa inaan maal gashano saddex ama afar jeer maalgashigan. Lacagta lagu kharash gareeyo meesha ugu horeysa waa 37 million Liras Turkish. Dabcan, qarashkani wuxuu kor u sii qaadi doonaa
Fettahoglu ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay keenaan mashruuca weyn ee wabiga ee gobolka Badda ee loo yaqaan "Trabzon" Trabzon Xilligan xadhigga ugu dheer wuxuu ku yaallaa Bursa. 10 waa km oo wuxuu ka kooban yahay laba marxaladood. Halkaan waa marxalad oo ka kooban saddex saldhig. Masaafada safka waa mitirka 3 bin 540. Masaafada u dhexeysa saldhigga koowaad iyo saldhigga labaad waa mitirka 2 bin 300. Masaafada u dhaxaysa saldhigga labaad iyo saldhigga saddexaad waa kun mitir 240. Isugeyntu waa fogaanta 3 kun mitir 540. Waxaan dooneynaa in aan mashruuc ka dhigno cabirka 58. Xarunteena labaad, 12 waxay leedahay meel ka mid ah hal kun oo mitir oo laba jibbaaran. Waxaan qorsheyneynaa adeegyadeena bulshada iyo goobaha baabuurta la dhigto Fettahoglu wuxuu sheegay in bartilmaameedkiisa ugu weyni ahaa inuu ka saaro xaydhada 9 ee xilliga dalxiiska ee Uzungöl. Laakiin dadaalkayga iyo halgankaygu waa inuu keeno dalxiiskii Uzungol ee dayaxa 9. Xilliga dalxiiska ee Uzungöl waa bilaha 2,5-3. Sababaha qaarkood, 3,5 xitaa ma ahan bil. Waa yoolkeena ugu weyn ee aan kor ugu qaadno tan ugu yaraan bilaha 9. Waxaan rabnaa inaan dalxiisyada jiilaalka keeno Uzungöl. Waxaan rabnaa inaan dib u soo nooleeyno awoodda haray ee Uzungöl leh sariirta 7. Sannadka soo socda, awooddan sariirta ayaa bilaabi doonta in la buuxiyo tan iyo 2018. Inkastoo aan sameyneyno mashruuc walaac leh oo leh 58 cabin, waxaan u maleyneynaa in aan awood u lahaan doono xarun 12 kun sariirood xagaaga, waxaanan rajeyneynaa mashruuc ka jawaabaya awooddan. Waxaan qorsheyneynaa inaan la shaqeyno ugu yaraan 3 kun xilliga jiilaalka. Waxa mustaqbalka ay muujinayaan, dabcan, waan noolaan doonnaa oo waan arki doonaa. Riyooyinkayaga, hadafkeena iyo ujeedooyinkeena waa sidaan
Fettahoğlu waxa uu rumaysan yahay in mashruuca Udunöl ee mashruuca Dhoobleey uu bedeli doono qaddarka gobolka ee shuruudaha ugu sarreeya. Marka laga eego Uzungöl, markaa dalxiis ayaa la fadhiisanayaa, qiimaha ayaa la fadhiisan doonaa, tayada adeeguna way fariisan doontaa. Sababtoo ah inta badan dadka reer Ruushku waxay u imanayaan qiyaasaan. Xilliga jiilaalka, dalxiiska Ruushku wuu buuxin doonaa. Turkey ayaa sidoo kale waxay leedahay waxbarasho ah u wakiishay by shirkadda Austria DOKA. Waxay shaqeynayeen muddo saddex sano ah. Waxay gobolka u kala qaybiyeen A iyo B. Aagga A; Waa qayb ka mid ah Kaçkarar, oo soconaya illaa iyo Oktoobar. Gobolka B waa Buurta Sooranli iyo dharkiisa. Sida laga soo xigtay daraasaddan, gobolkeenu waa meel aad u fiican. Waxay leedahay dooxad cajiib leh oo leh wadada 3 km ee buurta. Waxaan rajeynayaa in qaddiyadda gobolka ay isbedelayso gacanta dawladda. Laakiin our goal iyo ku haboon waa in ay ku noolaadaan buuxda jiilaalka Uzungöl'e 2018. "Waxa uu sheegay. Fettahoğlu ayaa sidoo kale uga mahad celiyay kuwa ka qayb qaatay mashruucan. Waxaan awooday in mashruucan laga bilaabo 2 sannadka 9 ee Wasaaradda Deegaanka iyo Magaaleynta. Wasiirka Deegaanka iyo Qorsheynta Magaalooyinka Mehmet Özhaseki'ye, Wasiir Ku-xigeenka Mehmet Ceylan, Dabiiciga Heritage Agaasimaha Guud ee Ilaalinta Kemalettin Genghis Tekinsoy Wasiirka Dhirta iyo Arrimaha Water Veysel Eroglu, Ku-xigeenka Akif Özkaldı in, National Parks Maareeyaha Guud ee saaxiibkiis our Nurettin Stone Waad ku mahadsantihiin. Waxay leeyihiin shaqo badan oo ku saabsan mashruucaan. Xadiiqadii hore ee National Park 12, oo hadda ah Agaasimaha Gobolka Bursa. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo Maareeyaha Gobolka Mustafa Bulut. Waxay leeyihiin dadaallo waaweyn. Waannu ku faraxsannahay cid kasta oo shaqaysa. Waxaan ahay 75 sida ganacsade. Kaligeyga kaliya ayaa ah in la arko in kor u qaadista. Waxaan kufilanahay Uzungöl si aad u faraxsan oo u timaado meesha uu u qalmo. Waxaan rabaa in aagga uu ku guuleysto. Kale oo aan ahayn, ma waxaan u badan oo laga filayo. "Waxa uu sheegay.
Isha: www.gunebakis.com.t waa
line YHT beddeli doonaa qaddar ee Anatolia ee Turkiga
3. duulimaadka ayaa bedeli doona qaddarka aduunka ee hawada
Kirsehir ayaa beddeli doona qaddiyadda mashruuca tareenka xawaaraha sare leh
Khadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Lagu Beddelayo Qaddarka Sivas
Mucaaradka Arkeoloji waxay saameeyeen qaddarka Marmaray
Mashruuca tareenka ee Badda Badda ayaa go'aaminaaya qaddarka gobolka
Khadka IZBAN Beddelay Masiirka Torbalı
Warshadaha tareenada ayaa go'aan ka gaari doona damiirka Trabzon Industrial Estate
Maalinta dadka ee baabuurta telefishanka
Mashruuca Gawaarida Alanya
Fiiri Shukrux's Profile
Gaadhiga wado ee Uzungöl
Warbixinta Nidaamka Trambus ee Degaanka Malatya
Arslan: Mashruuca Waxaannu qabaneynaa Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare oo leh Giriigga Ars